Maxay Diinta ka qabtaa Subaca? - Wikipedia
Maxay Diinta ka qabtaa Subaca
Al-Callaama Sheekh Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani –Eebbe ha u naxariistee- wuxuu ku yiri kitaabka ”Riyaadu-Saalixiinka” bogga ”136” isagoo ka faaloonaya Xaddiiska tiradiisu yahay ”250” ee uu lahaa Nebigu amaanta Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee: "... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم...": Yacni isku akhrinaya Qur’aanka qaarkood qaarka kale si aysan u hilmaamin sida uu qorayo kitaabka la yiraahdo ”Fayd al-Qadiir” iyo sida laga soo weriyay Axmed (2/407): ”Way akhrisanayaan oo baranayaan Kitaabka Eebbe Kor ahaaye iyagoo isbaraya”. Tebintiisuna way sugan tahay.
Ma in Qur’aanka lagu subciyaa ma aha waxa uu Xaddiisku tilmaamayo; maxaa yeelay waa Bidco gadaal laga keenay oo aan lagu dhaqmi jirin xiligii Salafka sida uu ku qoray Imaam Shaadibi kitaabkiisa la yiraahdo ”al-Ictisaam” (1/357-388). Waxaana Subaca inaan la oggoleen tilmaamay Imaam Maalik iyo Culimo kaleba sida ku qoran kitaabka la yiraahdo ”at-Tibyaan” ee uu leeyahay Mu’alifku -dhamaantood Eebbe ha u naxariistee-, in lagu dhego Naska macnihiisa guud kaas oo aan horay loogu dhaqmin ma aha sidii ay u fahmeen Salafka, maxaa yeelay Bidco kasta oo ay u arkaan dadka qaarkii wanaag sida badan waxay u daliishadaan Daliil leh macno guud sida ay ogyihiinba Culimada, qofkii doonaya macluumaad dheeraad ah, wuxuu u noqon karaa kitaabka la yiraahdo ”al-Ictisaam” iyo kutubta kale ee ka hadasha Usuusha Bidacda.
Sidoo kale Sheekh Albaani wuxuu ku yiri kitaabkiisa la yiraahdo ” الثمر المستطاب ” (2/793-794): Subaca waa Bidco oo lagama soo werin Nebiga amaanta Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee, lagamana soo werin mid ka mid ah Saxaabada, Nebigana a.n.k. mararka qaarkood wuxuu fari jiray qof inuu akhriyo Qur’aanka si uu u dhegeysto markuu akhrinayo, siduu Ibnu Mascuud ugu kor akhrin jiray Nebiga a.n.k., oo Nebigu a.n.k. wuxuu oran jiray: ”إني أحب أن أسمعه من غيري” Cumarna wuxuu fari jiray qof ku akhriya Qur’aanka isaga iyo asxaabtiisa iyagoo dhegeysanaya; mar wuxuu fari jiray Abuu Muuse marna wuxuu fari jiray Cuqba binu Caamir. Wuxuuna ku weriyay Xaafid Ibnu Rajab kitaabkiisa la yiraahdo ”Jaamic al-Culuum wal-Xikam” bogiisa (250). Waxaan ka turjumay kitaabka la yiraahdo ”Qaamuuska Bidacda”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxay_Diinta_ka_qabtaa_Subaca%3F&oldid=220114"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:22.